HORDHAC: Ajax vs Real Madriid xogta kulanka oo dhameestiran iyo xaqiiqooyinkiisa . – Gool FM
(Europe ) 13 Feb 2019 Boqorada yurub oo ah Real Madrid ayaa u safartay garoonka Johan Cruyff si ay ula soo ciyaaraan wareega lugta koowaad ee heerka 16-ka Champions league kooxda Ajax caawa oo arbaca ah .
Safka uu hurmuudka ka yahay macalin Santiago Solari’ ma qabaan wax cabsi iyo wal wal ah waxeyna maanka ku hayaan in guul muhiim aheyd aya ka soo gaareen kooxda ay dariska yihiin ee Atletico madriid bilowgii todobaadka kulan ku soo dhamaaday 3-1.
Dhinaca kale , kooxda Ajax ayaan heysan niyad sami ay ku wajahdo Madrid madaama aya qasaaro la soo kulantay kulankii ugu dambeyey ee ay ciyaartay .
Real Madrid ayaa heysata saf dhameestiran oo ay kula safartay Netherlands waxa ay weynayaan kaliyaa adeega axidigaha Isco iyo Marcos Llorente .
Xidiga milkiyadiisu ay lee dahay Barcelona ee Frenkie De Jong oo dhaawac ka soo laabatay ayaa ciyaaray 70-daqiiqo kulankii guuldarada ay kala kulmeen kooxda Heracles , balse waxaa la eegi doonaa in uu ku soo bilaavan karo kulan Real ee caawa .
Daafaca lagu magacaabo Lisandro Magallan ayaa nasiib daro dhaawac ku seegaya kulanka kooxdiisa Ajax aya la qaadaneyso dhigooda kooxda lagu naaneeso Cad Cadka .
Kulanka : Ajax vs Real Madriid (Champions League )
Goobta : Johan Cruijff ArenA
Garsooka : Damir Skomina (Slovenia)
Xaqiiqooyinka ciyaarta laga diwan giliyey:
– Ajax ayaa laga badinayey lixdii kulan ee ugu dambeyey ee wajahdo kooxda Real Madrid tartamada Europe waxaana kulamadaas lowga dhaliyey 20 gool hal iyagu ay dhaliyee n 2 gool oo qura , markii ugu dambeysay ee ay Ajax ay ka badiso Real Madriid waxa ay aheyd November1995 ciyaar ka tirsaneed Champions League heerkiisa guruubyada oo ka dhacday garoonka Madrid waxa ay ku soo dhamaatay 2-0 goolasha waxa ukala dhaliyey Jari Litmanen iyo Patrick Kluivert.
-kaliya hal jeer ayey bareejo galeen waana markoodii ugu horeysay ay iska hor imaadeen kulan rasmi ah oo tartamada Europe ciyaartaas oo ka dhacday Amisterdam xili ciyaareedkii 1967-68 waxa ayna ku idlaatay 1-1 goolka furitaanka ciyaartana waxaa dhaliyey Johan Cruyff.
– Ajax ayaa qeeb ka ah kooxaha aan marna laga badin intii lagu guda jiray wareega guruubyada tartanka Champions League waxeyna rikoorkaas la wadaagtaa kooxaha Barcelona , Bayer Munchun ,Lyon iyo Porto oo dhankooduna aan marna laga badin .
– waa is aragoodii 13-aad dhamaan tartamada ay qabato UEFA waxa aya horey u soo ciyaareen 12-kulan 7- jeer waxaa badisay Real Madrid halka Ajax ay guul gaartay afar mar halkulan bareejo ayey ku hishiiyeen .
-Kooxda reer Holand ayaan marna badin lixdii kulan ee ugu dambeyey ee ay ka ciyaarto Champions league kulamda bug baxa ( 2 -bareejo iyo 4- qasaaro )markii ugu dambeysay ee ay ka gudubto waxa ay aheyd sandkii 1996/97 markaas oo ay la ciyaareysay kooxda Atletico Madriid ciyaar lugti kowaad ku dhamatay 3-2 balse ay u suuro gasho in lugta labaad ay ku adkaadaan 4-3.
-Madrid ayaa eeganeysa sidii ay ku gaari laheed wareega quarter-finalka markoodii sagalaad oo xiriir ah sandkan . Rikoorka ay ka heestaan wareegan 16-ka ayaa ha 9-guul iyo 6- qasaro , waxaa dhacday in heerkan ay ka soo gudbi wayaan lixsano oo xiriir ah waana intii u dhaxeysay 2005 iyo 2010 , lkn hada waxa ay ka soo muuqanayaan sideedii sano ee la soo dhaafay .
-Kooxda ka dhisan Amsterdammers ayaa guuleysatay kaliya labo kulan oo kamida 14-kii ciyaarood ee ay wajahday kooxo ka socda Spain hal bareejo 11- qasaaro ah .
Eeg shaxda macquulka :
HORDHAC: Tottenham vs Dortmund ? Ogow wax kasta oo ku saabsan kulankan ...
Solari oo amaan kala dul dhacay Ramos, kahor kulanka ay caawa la ciyaari doonaan kooxda Ajax